Wararkii ugu dambeeyay Shirka dowlad Goboleedyada ee Dhuusamareeb & Kulumo gaar ka dhacaya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wararkii ugu dambeeyay Shirka dowlad Goboleedyada ee Dhuusamareeb & Kulumo gaar ka dhacaya
Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa caawa Dhusamareb ku booqday Madaxda Dowladaha xubnaha ka ah DFS oo uu martigaliyay.
Magaalada dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug waxaa xalay ka dhacay kulamo gooni gooni ah oo loogu diyaar garoobayo shirka Madaxda Dowlad Goboleedyada ee la filayo in uu saacadaha soo socdo ka furo Magaaladaas.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa si kala gooni gooni ah ula kulmay Madaxda Dowladaha xubnaha ka ah DFS oo uu martigaliyay.,kuwaas oo shirka ka qeyb-geli doona.
Madaxweyne Qoor Qoor ayaa la kulmay Madaxweynaha Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare & Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Cabdi casiis Xasan Maxamed (laftagareen) isaga oo kala hadlay arrimo ku saabsan qabsoomida shirka.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad ayaa sheegay in Shirka uu qabsoomay doono Jimcaha Maanta,isla markaana ay sidoo kale dhaceen shirar gaar gaar.
Wasiirka Dekadaha Galmudug Saabir Nuur Shuuriye ayaa dhankiisa sheegay inay u diyaar garowday Galmudug qabsoomida Shirka,sidoo kalena ay rajo ka qabaan inay wax wanaagsan kasoo baxayaan.
Wararkii ugu dambeeyay Shirka dowlad Goboleedyada ee Dhuusamareeb & Kulumo gaar ka dhacaya was last modified: July 10th, 2020 by Admin
3 qof oo maanta Muqdisho ugu geeriyootay COVID-19 iyo kiisas cusub oo laga helay meelo ay Puntland kamid tahay
Dhageyso:-Beelihii ku Dagaallamay Hiiraan ayaa La Heshiisiiyay Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.